Shrimp yamanzi amatsha amakhulu | Ngeentlanzi
URosa Sanchez | | Ihlaziywe 25/08/2016 19:51 | Amanzi akwariyam akwariyam, Izilwanyana ezingenamqolo
El i-shrimp yasemanzini Kuyinto engenamqolo kulula ukuyigcina kwi-aquarium, nangona kungasoloko kulula ukuyifumana. Umsebenzi wawo kukulawula indalo okanye izinambuzane ezinokuvela kwi-aquarium.
Imfanzi enkulu, eyaziwa njenge shrimp yaseAfrika Iwela kwiqela le-shrimp eyaziwa njenge-feeder yeefilitha. Ivela kwimimandla yetropiki yelizwekazi laseAfrika nakuMzantsi Merika. Kuninzi ibango labalandeli ngomsebenzi wakhe wokucoca.
Luxolo kakhulu kwaye isenzo se-aquariums. Nangona kufuneka ugcine engqondweni ukuba ayifanele ixutywe neentlobo ezinobundlobongela okanye intlanzi. Akunjalo neentlobo ezincinci kune-shrimp. Akucetyiswa ukuba ube kunye nezinye iintlobo zezilwanyana ezingenamqolo ezibizwa ngokuba zi-scavengers ezinenzipho ezinokuphela ziyonakalisa.
1 Isenzo esingafakwanga emqolo kwi-aquariums
2 Indawo yokuhlala kwi-aquarium
Isenzo esingafakwanga emqolo kwi-aquariums
Le yenye yezona zingenamqolo zininzi zohlobo lwazo. Inokufikelela kwi-15 cm. Ngaphandle kwayo ivolumu enkulu inoxolo ngokupheleleyo zezinye iintlobo ezihlala nayo kwaye zingonzakalisi izityalo. Nangona kunokwenzeka ukuba ekuhambeni kwakho ungonakalisa ezinye.
Inempawu ezithile zokuzikhusela. Inkqubo ye- iintsiba zokususa iintsiba kwimilenze yangaphambili. Ezi zinokufihlwa ngokuthanda kwaye zinokusetyenziswa njengenkqubo yokuzikhusela. Nangona eyona ixhaphakileyo kukuba ukhetha ukubalekela phakathi kwezinto zokuhombisa kwaye angaphakamisi umlo. Kungoko kufuneka ukuba aphile neentlanzi ezinoxolo.
Indawo yokuhlala kwi-aquarium
Awudingi zixhobo zininzi. Ukutya kwiintsholongwane. Ukuba bekungonelanga, ngendamnika ukutya okubandayo. I-aquarium kufuneka ibe nokuhamba komoya rhoqo kunye nokucoca okungcono. Yiyo loo nto iya kuba nobuncinane beemveliso ze-nitrogen. Amaqondo obushushu aphakathi kwama-20 nama-28ºC, yeyona nto ifanelekileyo ukuyigcina iphakathi kwama-24 nama-26ºC.
Ayisiyiyo invertebrate esebenzayo, i Shrimp ifuna indawo zokufihla. Iingcambu kunye nomhombiso ziya kuba yindawo yakho yokufihla. Kucetyiswa ngakumbi ukuba ube neentlanzi ezimbalwa zamanzi amatsha. Banomdla ngakumbi kwaye i-aquarium enkulu ayifuneki nayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » Shrimp yamanzi amatsha amakhulu